Mogadishu Journal » Wasiir Cawad oo Mareykanka uga qeyb galay Kulan Su’aalo lagu weeydiiyay
Wasiir Cawad oo Mareykanka uga qeyb galay Kulan Su’aalo lagu weeydiiyay
Mjournal :-Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee dawladda Federaalka Soomaaliya Amb. Ahmed Ciise Cawad oo maalmahan ku sugnaa magaalada Minneapolis Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa kulan la qaatay qaar ka mid ah Jaaliyadda Soomaaliyeed,qaybaheeda kala duwan & Madaxda Gobolka Minnesota,wuxuuna.
Mudane Amb. Ahmed Ciise Cawad ayaa ka war-bixiyey xaaladda dalka iyo guulaha laga gaaray arrimaha Siyaasadda,Ganacsiga iyo xariirka caalamiga ah.
Kullankaan oo ay iskaashadeen hay’adda Global Minnesota oo ah Hay’ad ay kullansadeen ganacsatada Gobolka & Jaamacadda Augosburg ayaa waxaa wasiirka Su’aalo laga waydiiyey Xaaladda dalka,isagoo jawaabo waafi ah ka siiyey dadkii goobta ku sugnaa.
Ugu danbayntii wasiirka ayaa Xusay doorka ay jaaliyadda Soomaaliyeed ku leedahay dib-u-dhiska Soomaliya,kulana dar-daarmay in ay tallo,Toosin & tabarucaadba uga qayb-qaataan kalin mug & miisaan ba leh.
Mucaaradka Sudan oo Aqbalay Wadahadal
DFS oo war ka soo saartay dagaalkii Kala-beyr guddina magacaabeysa